डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने ९ अर्बको आरोप प्रमाणित गर्न नसके झु’ण्डिन तयार छु । – Sudarshan Khabar
डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने ९ अर्बको आरोप प्रमाणित गर्न नसके झु’ण्डिन तयार छु ।
पुर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले आफुले केपी ओलि, देउवा र प्रचण्डमाथि लगाएको ९ अर्व भ्र’ष्टाचारको आ’रोप पु’ष्टि नभए वा गर्न नसके झु’ण्डिन तयार रहेको बताएका छन । एभिन्युज टेलिभिजनले लिएको सार्वजनिक गरेको अन्तरबार्ताको प्रोमो क्लिपमा उनको उक्त भनाइलाइ समाबेस गरिएको छ।
नेकपाका नेता भिम रावल लगाएतले डा. भट्टराईलाई उक्त आरोप सत्य हो र, उनिसंग प्रमाण भए अ’ख्तियारलाई प्रमाण दिन अ’नुरोध गरेपनी प्रधानमन्त्री केपि ओलि र नेकपा अध्यक्ष तथा पुर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयको कुनै औ’पचारिक धारणा बाहिर आएको छैन ।
स्मरण रहोस, यस अघि पनि डा. भट्टराईले २०४६ सालपछिका सम्पुर्ण प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च प्रशासकहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताउदै आएका छन ।
प्रकाशित भएको : October 15th, 2020